UFeliksi Lope de Vega, kutheni "El fénix de los ingenios"? | Uncwadi lwangoku
UJuan Ortiz | | Ababhali, iintlobo, Ithiyetha
Lope de Vega, «I-phoenix yamatye okusila».
Ukuva kwimilomo yababhali ababalaseleyo bexesha elidlulileyo ukuba uFeliks Lope de Vega "wayeyi-phoenix yobukrelekrele" ishiya ngaphezulu kwengcinga enye. Lo waseMadrid wazalwa ngo-1562 wafumana eli gama lesidlaliso ngokwamandla emveliso yakhe yoncwadi. Wayengekawugqibi ukwenza umsebenzi, xa wayesele enomxholo wabanye abahlanu engqondweni, enesidima, enzulu, enobukrelekrele.
U-Lope de Vega wayeyazi indlela yokuhlikihla amagxa nababhali ababalaseleyo bexesha, engomnye wezibane ezibaluleke kakhulu kwi-Golden Age yaseSpain. Ubugcisa bakhe bokubhala buhamba kumdlalo weqonga onobuciko obufanayo nobombongo, ukuthetha inyani, kwakungekho luhlobo loncwadi kwakunzima ukuba aluthathe; umbhali wayeyazi kakuhle into ayenzayo kunye nendlela awayeyenza ngayo. Wayengadlanga ilize kwintengiso yakhe, iisnethi zakhe ziyabongwa kwaye amakhulu namhlanje athetha ngobabalo lwakhe.
Kwaye ngokucacileyo, ngubani onetyala lesiteketiso "I-phoenix yamatye okusila"?
Imbali yoluntu ihlala izele zizinto ezininzi ezibangela iingxaki. Enye yezi yayikukwenza ababhali ababalulekileyo bolwimi lwesiSpanish bahambelane ebomini kwindawo kunye nexesha elifanayo. Kuyavela ukuba uMiguel de Cervantes y Saavedra akahlali kwilizwe elinye neLope de Vega, kodwa bekwangabahlali bendawo enye, kwaye bobabini, ekuqaleni, babewuthanda kakhulu umsebenzi wabo.
KwakuyiCervantes, eyamangaliswa kakhulu ngumbhalo kaLope wokubhala nokubhala, owambiza ngokuthi "i-monster yendalo" kunye ne "phoenix yobuchule." Iminyaka ihambile kwanjalo ke noLope de Vega owaziwayo, umbhali wemidlalo edlalwayo, indoda ehlekisayo, umlandeli okhutheleyo kunye nothandwayo ngumsebenzi kaVicente Espinel, oswelekileyo ofayo ngosiba lwakhe oluqaqambileyo.
Ukusuka kuthando ukuya kwintiyo phakathi kweLope de Vega kunye neCervantes
Ubomi buhlala buhamba bujikajika, nabani na okuncomayo namhlanje, ngomso, mhlawumbi, ufuna ukukutshabalalisa, akukho kwahluka phakathi kwama-greats. Inyani yile yokuba emva kokuhlala kunye kuzo zonke iindibano zentlalo kunye nokudumisa omnye komnye ngemisebenzi yabo, uLope de Vega noCervantes bajongana. Ukuba sithetha ngezaphuli-mthetho ekuqaleni kwembambano, imbali iveza ithiyori ezininzi.
KuKesare okukaKesare, masicace. Ngexesha leGolide Lonke uzuko, ngenxa yokuhlekisa kwakhe kunye nokusetyenziswa kakuhle kolwimi (kufutshane, kucacile, kuyinyani kwaye akululwanga), waya eLope de Vega. Ngeli xesha, iCervantes ibingaqondwa ngokupheleleyo. Kwaye ayisiyiyo loo El maco de Lepanto (njengoko batshoyo kumdali we IQuijote) yayingenakulunga, njengoko injalo, kwaye okuninzi, kodwa yayingeloxesha lakhe lokuqaqamba. Oko, ngokutsho kwabaphengululi abaninzi ngalo mbandela, hit the Cervantes's ego. Emva koko i-Lepanto ene-arm-one yaphuma yaya kulwa ne-Phoenix, ne-Phoenix yona yaphendula.
Ukuhleba ngapha nangapha kwakukhawuleza, kwaye enye yimbali edlulileyo. Nangona kunjalo, namhlanje amazwi akhe agweba imeko enjalo, eshiya umsebenzi, amabinzana kunye neemfundiso zokonwaba nokukhula koluntu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Lope De Vega, kutheni "iPhoenix yeeMill zeSwekile"?
"Ukufunda kufuneka kube luhlobo lokonwaba."